Mkpa ndị na-emepụta mmanụ na ndị na-ebunye mmanụ - China Mkpa mmanụ karama
Uru nke ụlọ ọrụ anyị, uru nke ngwaahịa anyị
Anyị bụ ndị ọkachamara rụpụta na-eme nnyocha, mmepe, mmepụta, ire na ọrụ nke ịchọ mma mbukota, na-emepụta ọgwụ nkwakọ na nri mbukota.
Anyị nwere onwe anyị nyocha na ngalaba mmepe, ọtụtụ ụdị ngwaahịa ọhụrụ anyị nwere ikikere, ugbu a anyị nwere ikikere atọ maka karama anyị, anyị gafere asambodo ule, dịka ọmụmaatụ SGS.etc.
Ngalaba anyị na-ere ahịa enwetawo egwuregwu kachasị mma e-commerce zuru ụwa ọnụ, ndị otu anyị niile nwere mmetụta siri ike nke ọrụ.
N'ogbe Green Amber Glass ...
N'ogbe Piel Glass ...
egwurugwu agba dị mkpa o ...
agba 5ml 10ml ihihi akaebe ...
15ml Square Clear Efu Gla ...
N'ogbe Oké Cobalt Blue Now Glass Boston ite
Agba ： cobalt-acha anụnụ anụnụ
Ike: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Service: silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ
N'ogbe Green Boston Glass karama maka mmanụ nwere mkpuchi
Olu: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Agba ： Green
New Design Amber Glass Single Gourd Mkpa mmanụ kalama
Olu: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Agba: Amber aja aja otu gourd mmanụ karama
Ojiji: Mkpa Mkpa
Style: Akwa Ogo
N'ogbe Omenala ịchọ mma refillable efu abụọ gourd mkpa mmanụ karama
Ike: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Agba ： Agba aja
Service: silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, ebi akwụkwọ agba ， decorating firing na ndị ọzọ na Filiks
Ngwa ： Zuru oke maka itinye mmanụ dị iche iche, dịka mmanụ dị mkpa, mmanụ ihe oriri, isi, senti, mmanụ ịhịa aka n'ahụ wdg.
Hot ire aja aja efu refillable Square Mkpa Oil karama
Ike ： 15ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Agba: agba aja aja amber gbara gburugburu na-echebe site na ụzarị UV ma nwee oke olu buru ibu maka ịwụfu na ndochi dị mfe.
Ojiji: Achịcha zuru oke maka mmanụ dị mkpa, ihe nsure ọkụ, mmanụ ihe ọmụma ma ọ bụ mmiri mmiri ọzọ yana capsules dịgasị iche na ọtụtụ ahịhịa na ngwa nri.
Ihe onwunwe: iko
N'ogbe efu aja aja amba aja aja iko mkpa mmanụ rollerball
Agba: amba aja aja
Ike: 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Ngwa: Enweghi ike iji ya chekwaa ihe ịchọ mma dị mma, mmanụ dị mkpa na ọrụ mmiri mmiri ndị ọzọ, iko aja aja nwere ọrụ pụrụ iche, enwere ike iji ya gbochie mmebi nke ọkụ ultraviolet, iji hụ na arụmọrụ nke mmiri mmiri ahụ.
Kpochapụ karama dị elu maka mmanụ nwere ụdị okpu
Ngwa: karama mmanụ dị mkpa bụ nhọrọ kachasị mma maka mmanụ dị mkpa, mmanụ ịhịa aka n'ahụ, ihe na-esi ísì ụtọ, ụlọ nyocha, kemịkal na mmiri ndị ọzọ.
Njirimara: Clear iko karama dị ezigbo mma maka njem.
Hot ire anụnụ anụnụ iko ala bọl ọkpọ maka mkpa mmanụ dị iche iche na ndu
Ike ： 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Agba: Amber-acha anụnụ anụnụ
Ojiji: Akara uhie bọọlụ na-acha anụnụ anụnụ maka mmanụ dị mkpa bụ ụlọ nchekwa maka mmanụ dị mkpa, ihe na-esi isi ụtọ na mmiri mmiri ọzọ.
Okpukpo karama amba a di egwu ma sie ike, na - eme ka o sie ike igbaji ma obu ichu.
Akpa amba nwere ike ichebe mmanụ dị mkpa na mmanụ ụgbọelu site na nsogbu. Anyị nwere njikwa ntanye ka mma, ihe ntanetị zuru oke nke dabara adaba na karama ahụ, yabụ mgbe ị kwadebere ngwakọta nke gị, ị ga-enweta ọnụọgụ ọnụọgụ ịchọrọ.
Hot ire Black Glass ala karama Mkpa mmanụ
Hot Sale Efu Refillable White poselin Mkpa Oil kalama
A na-eji karama eme ka karama iko ahụ, enweghị BPA na ndu, ọ nwere ike ịchekwa ma jiri mmiri mmiri gị nke ọma. Iko dị mma karịa plastik n'ihi na plastik nwere ike wepụ kemịkal n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Iko karama nwere ikike dị oke mma ma zuru oke maka ịgwakọta ihe nhicha nke gị, osisi ndị a na-agba agba, aromatherapy, ihe ntancha ụlọ maka ịkpụ, ntutu moisturizing spray, freshener ikuku, ala ma ọ bụ ihe nhicha akwa, A ngwakọta nke mmanya na mmiri iji hichaa windo, mee - elu moisturizer, wdg.
Psdị okpu na elu ga-adị iche.